BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal - Saacid: Waxaan ku doortay in aan gaarno isbeddel deg deg ah
Saacid: Waxaan ku doortay in aan gaarno isbeddel deg deg ah
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 13 Novermber, 2012, 19:45 GMT 22:45 SGA
Raiisul Wasaaraha Soomaaliya, Cabdi Faarax Shirdoon ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyay BBC ku sheegay in uu ku faraxsan yahay in baarlamaanku ansixiyey xukuumaddiisa. Waxa uu sheegay in tirada kooban uu ku doortay isbeddel deg deg ah in la gaaro.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya, Cabdi Faarax Shirdoon
Raiisul Wasaaraha dowladda Soomaaliya, Cabdi Faarax Shirdoon ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyay BBC ku sheegay in uu ku faraxsan yahay in baarlamaanak Soomaaliya ay ansixiyeen xukuumaddiisa.
Ra'iisul Wasaaraha ayaa ku ammaanay go'aanka ay xildhibaannada ku taageereen dowladiisa oo uu sheegay in tirada sabab uu u yareeyay ay tahay sidii ay isbeddel deg deg ah u keeni lahayd.
Raiisul Wasaare Saacid, waxa uu sheegay in markii uu eegay duruufta Soomaaliya iyo dhaqaalaha dalku heysto ay qasab ku noqotay dowlad kooban.
Waxa kale oo uu ka hadlay sababta uu uu xukuumaddiisa ugu soo daray, Fawsiya Yusuf Xaaji Aadan oo ka soo jeedda Somalilan.
Raiisul Wasaaruhu waxa uu yiri "aniga ma qabo in Fawsiya ay ku jirtay kala go'a, oo ay olole gaar ah gashay waxaan arkay dastuurka xisbigeeda"
Waxa uu sheegay in sabab uu uga shakiyo aanay jirin Fawsiya iyo dadka kale ee ka tirsanaa jabhaddii SNM.
Raiisul Wasaaruhu waxa kale oo uu ka hadlay maamul u sameynta magaalada Kismaayo oo uu sheegay in ay dowladdu ka soo saartay qoraal siyaasadeed oo waafaqsan dastuurka, kaasi oo ah in ay ku taageeraan dadka degaanka inay maamul sameystaan.